Soomaaliya oo Kaalin Wanaagsan Ka Gashay Wadamada Ugu Farxada Badan Dunida iyo kenya oo ka xanaaqday kkkkkkkkk - iftineducation.com
Soomaaliya oo Kaalin Wanaagsan Ka Gashay Wadamada Ugu Farxada Badan Dunida iyo kenya oo ka xanaaqday kkkkkkkkk
aadan21 / March 17, 2016
iftineducation.com – Warbixin dhawaan lasoo saaray oo lagu magacaabo Warbixinta Farxada ee Caalamka ama World Happiness Report (WHR) ayaa waxaa lagu muujiyay in sanadkaan 2016 uu dalka Soomaaliya kaalin wanaagsan uga jiro wadamada dadkoodu faraxsan yihiin ee dunida.
Warbixintaan oo sanadle ah ayaa waxaa soo saarta QM. Warbixinta ayaa muujisa in farxada waxyaabaha keeni kara ay ka mid yihiin balse aysan ku koobneyn horumarka dalka, dhaqaalaha dadku heysto iyo inta ay fili karaan inay noolaadaan.
Hase ahaatee, waxaa sidoo kale warbixintu muujinaysaa in asbaabtaa kaliya aysan ku imaan balse siyaabo kale ay sidoo kale dadku farxad ku heli karaan.
Dalka ugu farxada badan ee liiskaa ugu sareeya sanadkaan ayaa ah Denmark. Soomaaliya oo ah wadan uu dagaal sokooye ka jiray 25kii sano ee lasoo dhaafay ayaa gashay booska 76. Waxaana hubaal ah inay aad uga horeyso dalal badan oo qaarada Afrika kuyaala ama kujira caalamka Islaamka.
Halka tobanka dal ee ugu hooseeya liiska ahna kuwa ugu farxad yar ay badankoodu kuyaalaan qaarada Afrika inteeda ka hooseysa saxaraha. Wadamadaa tobanka ugu liita dhanka farxada dadkooda waxaa kujira dalalka Tanzania, Burundi oo ayadu dhankaa uguba liidata iyo Rwanda.
Waxaa kula jira tobankaa ugu hooseeya dalalkaa Afrikaanka ah wadamada sida Suuriya iyo Afghanistan.
Hoostaan ka daalaco liiskaa dalalka iyo sida ay ugu kala horeeyaan:
Heerka Farxada Dadka
26 Argentina 6.650
68 Latvia 5.560
76 Somalia 5.440
121 Armenia 4.360
154 Afghanistan 3.360
waxa meeshan ka dhacay indhahaaga ku arag adaa yaabayee
daawo gabar ka sheekeyneyso in habeenka aqal galkeeda sixun loo bikrajabiyay